सन्जुः लेसन अफ लाइफ कि, सेलिब्रेशन अफ लाइफ? - हिमाल दैनिक
सन्जुः लेसन अफ लाइफ कि, सेलिब्रेशन अफ लाइफ?
१६ असार २०७५, शनिबार १३:२७
भारतीय चलचित्र जगतमा स्थापित कलाकार भएर पनि कहिले लागूऔषध दुरूपयोग काण्डमा त कहिले बम विष्फोटन, कहिले एके ५६ हतियार वरामत र कहिले अण्डरवल्डका कुख्यात अपराधिसँगको सम्बन्ध जस्ता अनेकन विवादमा मुछिएका पात्र हुन्( सञ्जय दत्त।
फिल्म जगतमा प्रख्यातीसँगै अपराधको दुनियाँसँग बेलाबेलामा जोडिएर विवादमा परेको उनै सञ्जय दत्तको जीवनीमा आधारित वायोपिक शुक्रबार रिलिज भयो।
भारतीय फिल्म जगतमा सञ्जय दत्त कुनै नौलो नाम होइन। उनलाई दर्शहरुले सिनेमाको पर्दामा थुप्रै अवतार र भूमिकामा देखिसकेका छन्।
कुनै बेलाको भारतीय फिल्म जगतमा पारिवारिक सन्देश बोकेको ‘नाम’ फिल्मबाट नाम कमाएका सञ्जय दत्तले ‘खलनायक’मा निर्वाह गरेको भिलेनको रोल होस् या प्रेमकथामा आधारित ‘साजन’ फिल्ममा गरेको सायरी लभरको भूमिका। वास्ताव फिल्ममा रघुको भूमिका होस् या मुन्ना भाइमा मुन्नाको रोल, सबैमा उनले निभाएको भूमिकाले दर्शकमाझ बेग्लै छाप छोड्न सफल भएका छन्।
सन् १९५९ जुलाई २९ मा जन्मिएर झण्डै चार दशक भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा जीवन विताएका सञ्जय दत्तको वास्तविक जीवन कहानी पनि कुनै रिलको माध्यमबाट सिनेमाको पर्दामा देखिने जीवन भन्दा कम छैन। त्यसैले बलिउडका अत्याधिक सफल चलचित्र निर्देशक राजकुमार हिरानी र अभिजातले सञ्जयकै मुखराविन्दबाट उनको जीवनीबारे सुनेपछि त्यसलाई सिनेमाको पर्दामा उतार्ने निदो मात्र गरेनन्, सबै काम सकेर जुन २९ तारिख आफ्नो नयाँ फिल्म ‘सञ्जु’ रिलिज गरिसके।
निर्माता एवं निर्देशक राजकुमार हिरानीका अनुसार, यो फिल्ममा बाबु छोराको सम्बन्धदेखि साथी भाइको यारी दोस्तीसँगै वास्तविक जीवन र फिल्मबीचको अन्तरनिहित प्रश्न समेत छ।
सञ्जयको रूपमा कलाकार रणवीर कपूरले भूमिका निभाएका छन्। करिब साढे २ घण्टाको फिल्ममा सञ्जयको जीवनमा घटेका घटनालाई वेजोड ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।
हुन त भारतीय फिल्मबारे चासो राख्ने जो कोहीले पनि उनको बारेमा नसुनेको अथवा थाहा नपाएको कमै होलान्। सधैँ मिडिया जगतमा कुनै न कुनै समाचारको केन्द्र बनेर उनी छाइरहन्छन्।
तर, यस फिल्मबाट उनको जीवनमा घटेका घटनाहरु उनैले दिएको जानकारीका आधारमा अध्ययन अनुसन्धानपछि सत्यताको नजिक पुग्ने कोशिश गरिएको निर्माता राजकुमारको दाबी छ।
यस फिल्ममा सञ्जयको बुबा सुनिल दत्तको भूमिकामा अभिनेता परेश रावल रहेका छन् भने उनकी आमा नरगिसको भूमिकामा वलिउड अभिनेत्री मनिशा कोइराला देखिन्छिन्। त्यसैगरी सञ्जयको प्रेमिका (गर्लफ्रेन्ड) रुपमा सोनम कपूर र रिपोर्टरको भूमिका अनुष्का शर्मा छन्।
सन् १९५९ जुलाई २९ तारिखमा भारतीय चर्चित अभिनेता सुनिल दत्त र नर्गिसको कोखबाट जन्मिएको सञ्जय ‘बलराज’ दत्त (सञ्जय दत्त) ले अहिलेसम्म १ सय ८७ भन्दा बढी फिल्ममा भूमिका निर्वाह गर्दै फिल्म जगतमा एक सफल अभिनेताको रुपमा चिनाउन सफल भएका छन्।
रोमान्टिक फिल्मबाट आफ्नो फिल्म करियर सुरु गरेका सञ्जयले कहिले ग्याङ्स्टार, कहिले पुलिस त कहिले राजनीतिज्ञको भूमिका निर्वाह गर्दा उनको भूमिकाप्रति उनका दर्शकहरुको कुनै गुनासो छैन। बरू कपितय कमेडी फिल्ममा समेत सफल कमेडियनका रुपमा स्थापित हुन सफल भएका छन्।
करिब चार दशकको फिल्म करियरमा सञ्जयले दुई वटा फिल्म फेयर अवार्ड, दुई आइफा अवार्ड, तीन स्क्रीन अवार्ड जस्ता पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन्।
फिल्मको पर्दामा जस्तै वास्तविक जीवनमा पनि उनले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ। सञ्जयले एउटै जीवनमा थुप्रै जिन्दगीका कथाहरु लेख्ने र जीउने काम गरेका छन्।
फिल्मको पर्दामा जस्तै उनको वास्तविक जीवनमा धेरे उतार चढाबसँगै रोलर कोष्टर राइड जस्तै छ। कहिले उनले सुख सयल र मोज मस्तीको जीवन विताए भने, कहिले अति दयनिय जीवन पनि विताए। कहिले बसको टिकटका लागि चन्दा मागे त कहिले चार्टर प्लेनमा पनि घुम्न भ्याए।
न्युयोर्कका तारे होटहरुमा पनि बसे जहाँबाट न्युयोर्क सिटी देखिन्थ्यो भने उनी जेलको कालकोठरीमा पनि जीवन विताउन बाध्य भए जहाँ उनले दिनमा देखिने घामको किरण पनि देख्न पाएनन्। ठूला ठूला आलिसान महलका बेडमा रात विताएका सञ्जयले कहिले एउटा सानो कोठा जहाँ शौचायल भरिएपछि आएको दिसा पिसाबले भरिएको ठाउँमा पनि सुत्न बाध्य भए।
उनले एउटै फिल्म खेलेर करोडौँ रुपैया पारश्रमिक स्वरुप लिन सफल पनि भए भने कहिले पेपर व्याग बनाएर पाँच वर्षमा थोरै रकम पनि हात पारे।
सुनिल दत्त र नरगिसका एक्लो छोरा सञ्जयले आफ्नो फिल्म करियरको सुरुवात सानै उमेरमा सन् १९७२ मा आफ्नै बुबाले खेलेको फिल्ममा कवाली गायकको रुपबाट गरे। सन १९८७ मा रक्की फिल्मबाट मुख्य भूमिकामा देखिएका सञ्जयको उक्त फिल्म प्रिमियर हुनुअघि नै उनकी आमाको पेङक्रियाजको क्यान्सरबाट मृत्यु भयो। मातृ वियोगको पिडा भुल्ने बहानामा उनी लागूऔषधको दुर्वेशनीमा फँसे।
लागू औषधमा परे पनि उनले धेरै फिल्ममा सफल भूमिका निर्वाह गरे। रक्कीपछि उनले विधातामा भूमिका निर्वाह गरे र रातारात चर्चित कलाकारको रपमा स्थापित हुन पुगे। जुन, सन १९८२ को सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्मका रुपमा दर्ज भयो। त्यस लगत्तै १९८३ मा में आवारा हुँ भन्ने फिल्म पनि हिट भयो। त्यसपछिका दिनमा पनि उनको सफलताको पारो तल झरेन सधैँ उकालो नै लागि रह्यो।
सन् १९९३ मा मुम्बइमा भएको बम विष्फोटका घटनामा सञ्जयको नाम पनि मुछियो। त्यतिमात्र होइन, उनको घरबाटै सुरक्षाकर्मीले आधुनिक हतियार एके-५६ वरामद गर्‍यो। जुन मुम्बई आक्रमको क्रममा प्रयोग गरिएकै हतियार भएको र त्यो उनले अण्डर वल्डका खतरनाक नाइके अबु सलिमबाट लिइएको भन्दै उनलाई आतंकवादीको संज्ञा दिइयो।
सन् १९९३ अप्रिलमा उनलाई हिरासतमा लिइयो। सुप्रिम कोर्टले उनलाई सन १९९५ अक्टोबरमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। तर, डिसेम्बरमा उनलाई पुनः पक्राउ गरियो र पछि ९७ अप्रिलमा फेरि धरौटीमा रिहा गरियो।
सन् २००६ मा अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा चल्यो जसको दौरानमा उनी सात महिना जेल जीवन बिताउन बाध्य भए। सन् २००७ जुलाई ३१ तारिखमा सञ्जयलाई अवैध हातहतियार राखेको अभियोजमा दोषी ठहर गर्दे जेल पठाइयो। बम विष्फोटनको घटनामा सफाई पाए पनि उक्त घटनाको कारण उनीको जीवनमाथि खतरा रहेको कारण देखाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न अस्विकार गर्यो।
सन् २००७ अगस्ट २० तारिखको दिन उनलाई धरौटीमा छोड्न अन्तरिम आदेश भयो तर फेरी अक्टोबर २२ मा पक्राउ गरियो। नोभेम्बर २७ मा धरौटीमा रिहा गरियो र सन् २०१३ मार्च २१ तारिखको दिन सञ्जयको जेल सजाय कम गर्दै पाँच वर्षमात्रै गरियो। जसमा उनले १८ महिना पहिले नै जेल जीवन विताइसकेका थिए। सन् २०१६ फेब्रुअरी २५ तारिखको दिन सञ्जयले आफ्नो जेल सजाय काटेर निस्किए।
उनको यो जीवन कहानीबारे चासो राख्नेले विभिन्न माध्यमबाट सुन्दै र सुनाउँदै आएका थिए तर, आज राजकुमार हिरानीको पहलमा त्यही यथार्थतामा आधारित जीवन कथा फिल्मको पर्दामा हेर्ने अवसर दर्शहरुलाई मिलेको छ।
Prevपछिल्लोप्रधानमन्त्री ओलीले भेटेनन् सांसद
अघिल्लोमनसुन सक्रिय हुँदै, देशभर वर्षा हुनेNext